Imvume yokusebenza - izigidi zabenzi
Izimvume zokusebenza ngaphakathi
Sisekela Abantu Bodwa kanye Nezinkampani ekutholeni amathuba nabavotelwa, ngokulandelana bese besebenzisa nasekuqedeni inqubo.
Ngokusekelwa kwethu okucacile, okufingqiwe nokwenziwe ngezifiso, uzoqonda indima yakho enqubweni yokufuduka futhi wazi kahle ukuthi yini okudingeka uyenze ukuze wena nomndeni wakho niye ekhaya lakho elisha ngokushesha okukhulu. Ngisho nezidingo kuphela zokufudukela kwamanye amazwe kunzima ukuziqonda — ungalokothi ukhathalele imingcele yezikimu zokufuduka ezinemigqa eminingi. Uma uzithola ulahlekile olwandle lwemithetho neziqondiso zabokufika, Abenzi Million bazosiza. sizokwenza okuyinkimbinkimbi, kuqonde kakhulu futhi kube lula, njengoba sizozama ukukuqondisa wena nomndeni wakho ngesidingo sabokufika ezweni lakho elisha. Ngokusekelwa kwethu okufingqiwe, okucacile nokwenziwe ngokwezifiso, uzoqonda indima yakho ezinqubweni zokufuduka futhi uqaphele ngokunembile ukuthi yini obekufanele uyenze ukuze wena nomndeni wakho niye ekhaya lakho elisha ngokushesha okukhulu ngendlela ephumelela kakhulu.
Kwezinye izikhathi izidingo ezilula zokufuduka zingaba nzima kakhulu ukuyiqonda, kepha, ungalokothi unakekele amapharamitha wezinhlelo ezihlukene zokufuduka. Uma uzithola ulahlekile olwandle lwemithetho neziqondiso zokufika, iMilion Makers izogqugquzela. Sizokwenza kube nzima kakhulu ukwedlula lokhu njengoba sinomkhuba wokukuhola wena nomndeni wakho ngezidingo zokufika ezweni lakho elisha.
Ngokusekelwa kwethu okucacile, okulula, okufushane, okucacile, okwenziwe ngezifiso, uzokuqonda kahle iqhaza lakho kwinqubo yokufuduka futhi uqonde kahle ukuthi yini okudingeka uyenze ukunxenxa wena nomndeni wakho ekhaya lakho elisha ngokushesha okukhulu.
Ukukhethwa kwamathuba / Izinketho ezinhle kakhulu zokufeza ngempumelelo izinjongo nezinhloso.
24/7/365 ukufinyelela kumacala akho kusuka kunoma iyiphi indawo emhlabeni.
Ukufinyelela imithetho emisha yokufika, iziqondiso nezindaba.
Noma ngabe unemfuneko enkulu yemibuso eminingi noma ufuna usizo lokufika kwelinye izwe noma isifunda esichazayo, abenzi beMiliyoni bazokusiza ngaphandle komthungo ukuphatha ukunyakaza kwabasebenzi / nabasebenzi bakho. Kuklanyelwe ukwanelisa izidingo zakho zokusekelwa okuphelele, uhla lwethu oluphelele lwezinsizakalo zemvume yokusebenza nezinsizakalo zokugunyazwa zenza kube lula ukuqinisekisa ukuthi inqubo iyahambisana nemithetho nemithetho yokufika.
Lezi zinsizakalo zifaka:
Ukulungiswa kwesicelo nokufayilwa kwemvume yokusebenza okwesikhashana nezimvume zokuhlala, ama-visa okufaka, imvume yokungena kanye nezindaba zokufika.
Visa udaba ukwesekwa.
Ukwelulekwa ngenqubo yokungena nokusuka.
Ukwelulekwa ngenqubo yezokuphepha kanye nokwelashwa.
Ukwelulekwa kwamacala ayinkimbinkimbi, kufaka phakathi ukwesekwa kanye nokwazisa ngaphambi kwezinhlangano zikahulumeni.
Isincomo sokuncishiswa kwama-visa namalungu omndeni, ikhono lokuthola izindaba, izindaba ezihlobene nomfundi nokulondolozwa kokuma nesimo.
Ithimba lethu labasebenza kahle nabanesipiliyoni bazinika isikhathi sokuqonda izinhloso zebhizinisi lenkampani yakho, izinjongo zokufika kwabokufika kanye nezisebenzi. Baxhumana ngokukhululekile nawe kanye nabahlanganyeli bakho kuyo yonke inqubo yokufika, bakha ubudlelwane obuthembekile futhi banikeze ukusekelwa okuphelele, okwenziwe ngokwezifiso.
Khetha izwe leMvume yokusebenza
Amazwe afiswa kakhulu ngabangenele ukhetho
Sisebenza nabaqashi kanye nabaqashi emazweni ashiwo ngezansi: